Fifindràmonina · Jona, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Fifindràmonina · Jona, 2018
Tantara mikasika ny Fifindràmonina tamin'ny Jona, 2018
Indonezia: Tany nihotsaka nahafatesana olona tany Papouasie Andrefana
Olona maherin'ny 80 no maty ary an-jatony maro no mbola tsy hita popoka raha nandrava ny tanàndehiben'i Wasior any Papouasie Andrefana, Indonezia ny tany nihotsaka.
Tantara nomerika mitantara ny herisetra nihatra tamin'ny Shinoa nandritra ny fitroarana tamin'ny taona 1998 tao Indonezia
Aostralia 20 Jona 2018
20 taona lasa izay, zara raha fantatra ny taona 1998. Misy zavatra maro tokony hatao amin'ny fanasitranana, mba hahazoana karazana rariny. Tsy miresaka momba ny fanasitranana amin'ny ambaratongan'ny tsirairay manokana ihany aho, fa amin'ny maha-firenena mihitsy.
Etazonia: Al Jazira, voasivana?
Amerika Avaratra 18 Jona 2018
''Tamin'ny 2005, rehefa nizara ny fikasany hanangana fantsona amin'ny teny anglisy ny Al Jazira, sady nahazo fanohanana no hetsika fanoherana tany Etazonia ny fanambaràny. ''
Ny fiovan'ny toetrandro aty Afrika: Feo avy any Kenya sy any am-pielezana
Afrika Mainty 14 Jona 2018
Mifantoka amin'ny adihevitra momba ny fifandraisana misy eo amin'ny fiakaran'ny hafanana any amin'ireo toerana izay antonony teo aloha ao Nairobi, sy ny fiverenan'ny tazomoka indray ny bilaogy momba ny tontolo iainana sy politika ao Kenya.
Miraondraona ny bilaogy any Azia Atsimo
Azia Atsimo 10 Jona 2018
Mitaky ny lalàna tamin'ny taona 1979 fa rehefa manao fiampanga fanolanana ny vehivavy dia tsy maintsy manolotra vavolombelona efatra lahy izy. Raha tsy mahita ireo vavolombelona ireo izy dia ny tenany ihany no tompon'andraikitra tamin'ny fanitsakitsaham-bady....
Afrika Mainty 02 Jona 2018
Mpifindra monina iray tsy manana taratasy avy any Mali nianika tranobe iray ary sambany sahy nipoitra ampahibemaso.